Moto 360 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Androidsis
Alfonso က de Frutos | | reviews, စမတ်နာရီ
El Moto 360 ပြီးသားစပိန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစမတ်နာရီများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်း၏ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းကြောင့်၎င်းကဲ့သို့သောလေးလံသောအလေးများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အားကြီးနေသည် r ကိုကြည့်ပါ သို့မဟုတ် Samsung Gear S
ဒီနေ့စပိန်နိုင်ငံမှာ Moto 360 ရဲ့တရားဝင်ဖြန့်ချိမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကျွန်တော့်ကိုယူဆောင်လာပါတယ် Moto 360 ပြန်လည်သုံးသပ် သုံးပတ်အကြာတွင် Motorola စမတ်နာရီသစ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်။
2 Motorola Moto 360 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
4 Moto 360 ဘက္ထရီဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးမှာလဲ။
ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် - Moto 360aတကယ်ကောင်းတဲ့စမတ်နာရီ။ ပြိုင်ဘက်အများစုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော Motorola ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကိုယ်ထည်၏ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဒီဇိုင်းသည်ထုတ်လုပ်သူသည်အမြင်အာရုံနှစ်သက်သော terminal ကိုရှာဖွေနေသည်ကိုထင်ရှားစေသည်။
လူမီနီယံနှင့်တစ် ဦး နှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သံမဏိဘောင် Moto 360 သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောအချောသတ်များရှိပြီးအသုံးပြုသူများနှစ်သက်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်း၏အံ့အားသင့်ဖွယ်ပေါ့ပါးမှုကိုအလေးပေးပါကအလေးချိန် ၄၉ ဂရမ်သာရှိပြီး၎င်းသည် Mrist 49 ကိုလက်ကောက်ဝတ်တွင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာနာရီကိုအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးငါ့လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင် Moto 360 ဝတ်ဆင်ရန်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်သော်လည်း, ငါကမှကျင့်သုံးပြီးတစ်ချိန်က, အမှန်တရားကယ့်ကိုအဆင်ပြေလွယ်ကူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အကြားရွေးချယ်နိုင်သည် နာရီမျက်နှာအဘို့အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများပုံမှန်အားဖြင့် ၄ င်း၏ထူးခြားသောအပ်များဖြင့်ပိုမိုရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီမှာသင်အရောင်တွေအရသာရှိတယ်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပစ္စည်းကိုရှာရန်သင့်တွင်မော်ဒယ်များအလုံအလောက်ရှိသည်။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသေးစိတ်ကတော့သူ့ရဲ့ကြိုးပါ။ သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ကိရိယာ၏အထွေထွေဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးထိတွေ့မှုသည်သာယာသည်။ Motorola ကအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးခွင့်ပြုလိုက်သည် Moto 360 သိုင်းကြိုးသည်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သည်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမူရင်းခါးပတ်ကိုချစ်ပေမယ့်။ ၎င်း၏ပိတ်မှုအဆင်ပြေခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအသွင်အပြင်သည်။ ငါမလိုအပ်ပါဘူး
ငါ၏အံ့ဖွယ်ဒီဇိုင်းတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာထုတ်ကုန်၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ Moto 360 ဟာသေးငယ်တဲ့စမတ်နာရီတစ်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်လက်ကောက်ဝတ်လေးများရှိသောအမျိုးသမီးအချို့သည်၎င်းကိုနည်းနည်းပါးပါးရှာပါလိမ့်မည်။
ဒီဇိုင်းပြissueနာသည်အတော်အတန်ပုဂ္ဂလဒိis္ဌာန်ရှိသော်လည်းလူတိုင်းကသူတို့အမြင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ၎င်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး Motorola သည်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စမတ်နာရီသည်သမားရိုးကျနာရီတစ်လုံးနှင့်တူသည်။ Big M ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်အောင်မြင်မှုထက်ပိုပြီးရှိသည်ဟုမည်သူမျှမငြင်းနိုင်ပါ။ Moto 360 ကိုအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ အနက်ရောင်နှင့်ငွေရောင်.
Motorola Moto 360 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
၆.၁ လက်မ LCD 320 × 290 pixels (205 dpi) Gorilla Glass 3.46mm အချင်းနှင့် ၁၁.၅mm အထူ Android Wear Android 4.3 နှင့်အထက် TI OMAP ၄၄၆၀ 512 ကို MB
4 GB ကို Bluetooth 4.0; ပတ်လည်အလင်းအာရုံခံကိရိယာနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ IP67 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် 320 mAh ဘက်ထရီ
El Moto 360 ဟာ့ဒ်ဝဲကအတော်လေးကန့်သတ်ထားသည်စိတ်ပျက်စရာအချက်အချို့ရှိသော်လည်းစမတ်နာရီအကြောင်းပြောသောကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည်၊ နောက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာဖြစ်သည်။
Moto 360 သည် Texas Instruments OMAP3630 SoC ကိုပေါင်းစပ်ထားသည် ခေတ်မမှီတော့တဲ့ပရိုဆက်ဆာ အချိန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူထံမှ Android စျေးကွက်တွင်မေ့သွားသည်။ Motorola စမတ်နာရီ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်လုံလောက်သည်ထက်မှန်သော်လည်း၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များက Snapdragon 400 ကိုပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောပရိုဆက်ဆာအဟောင်းများကိုသုံးခြင်းမှာထူးဆန်းသည်။ အကယ်၍ Moto 360 သည်၎င်း၏ပြိုင်ဖက်များထက်အတိအကျစျေးမကြီးနိုင်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားပါက ပို၍ အံ့သြသွားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ IP67 အသိအမှတ်ပြုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည် နာရီပေါ်မှာပြwithနာမရှိဘဲရေချိုးခွင့်ပြုသည် ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်မှုန့်ခုခံနိုင်စွမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အပြင်။ ၎င်းကိုပြိုင်ဘက်များနှင့်ခွဲခြားထားသည့်အခြားအသေးစိတ်အချက်တစ်ခုမှာနှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင်နေ့စဉ်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတာရန်စီစဉ်နိုင်သည်။ ငါလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများတွင်၎င်းသည်သွေးခုန်နှုန်းကိုမတွေ့နိုင်သည့်အကြိမ်များစွာရှိခဲ့သည်၊ အကြိမ်များစွာပြန်လည်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်း။ မရနိုင်သောအရာဖြစ်သော်လည်းအချို့သောအချိန်များ၌စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းအဆုံးသတ်သွားနိုင်သည်။
နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အသေးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဖန်သားပြင်တောက်ပမှုကိုအလိုအလျောက်ခွင့်ပြုပေးတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်ကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုများကိုချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်နာရီသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်ဘက်ထရီကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာသုံးစွဲနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်နာရီမျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေလိုပါကသင်၏အချိန်ကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်ကိုသာဖွင့်ပြီးအလိုအလျောက်လင်းလာလိမ့်မည်။ မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ထားရန်၎င်းကိုသင်၏လက်ကိုထည့်ပါ။ ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံသည်ကျန်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
Android Wear သည် Moto 360 beat ကိုတာဝန်ယူသည်။ သင်မသိသေးသောဂူးဂဲလ်ဝတ်ဆင်နိုင်သောလည်ပတ်မှုစနစ်အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပါ ဦး။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သူက Moto 360 မှာအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ပထမတော့အရမ်းသဘောကျစရာမကောင်းဘူး။
အဆိုပါ moto 360 Google Now မှတဆင့်အသံအမိန့်များကိုဆက်တိုက်ဖွင့်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည်, မှတ်စုတစ်ခုယူသို့မဟုတ်သင်၏သွေးခုန်နှုန်းယူပြီးလိုပဲ။ သတိရရမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါသည် - Moto 360 သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြေကြားရန်သင့်အားခွင့်မပြုပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါ့လက်ပတ်နာရီကနေပြောနေတာကိုမတွေ့ရဘူး၊ ငါစကားပြောနေတာကိုသိတဲ့လူတိုင်းကနည်းနည်းစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေပုံရတယ်၊ ကားမောင်းနေရင်းအဲဒါကိုသုံးရတာကောင်းပါတယ်။ ၎င်းအတွက်သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်း၏လက် - အခမဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
လက်ပတ်နာရီသည်ကြည့်ကောင်းနေပြီးယင်း၏ hardware သည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေရန်လုံလောက်သည်။ ယခုအချိန်၌စကားပြောရန်အချိန်ရောက်လာပြီ Moto 360 မျက်နှာပြင်။ အရွယ်အစား 1.56 လက်မနှင့် resolution 320x 290 pixel ရှိပြီးသိပ်သည်းမှု 205 dpi အပြင် Moto 360 ၏မျက်နှာပြင်သည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိပါ။
ဒါဟာတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းပါတယ်မှန်ပေမယ့်အချိန်ကောင်းတွေရှိပါတယ် pixels တွေကိုတန်ဖိုးထားနိုင်မှာပါ။ အထူးသဖြင့်သင်သတိပေးစာကိုလက်ခံရရှိသောအခါ၎င်းကိုသင့်ထံသို့ပို့သူ၏ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အများကြီးအလင်းအာရုံခံကိရိယာ၏လုပ်ထားပြီး။ အမှန်တရားမှာအစတွင်၎င်းသည်အလွန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ နာရီကိုလုံးဝြပည့်စုံ။ မရကြောင်းတွေ့မြင်ရသဖြင့်အနက်ရောင်အစင်းကြောင်းကြောင့်ဒီဇိုင်းကိုလုံးဝချိုးဖျက်နိုင်သည့်အတွက်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ငြင်းဆန်ရသနည်း။
ပထမတော့ငါကြည့်နေတယ် သူကပြောတယ်အနက်ရောင်အစင်းရက်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီးနောက်သင်လုံးဝမေ့သွားနိုင်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအဆုံး၌သင်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသော "အမှား" ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည်တန်ဖိုးရှိသော်လည်း
ကျွန်တော်မကြိုက်သည့်နောက်ပြissueနာတစ်ခုမှာပတ် ၀ န်းကျင်၏အစွန်းတွင်ဖြစ်သည်။ သတ္တုဘောင်နှင့်နယ်ပယ်အကြားချိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်မှုတစ် ဦး ဖန်တီးပါ သက်တံအကျိုးသက်ရောက်မှု ယင်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ, ဗေဒကောင်းသောကြည့်ရှုမထားဘူးသော။ အသိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါပေါ်လာသည့်ပြproblemနာတစ်ခု။
ငါမကြိုက်ဘူး Moto 360 စွမ်းဆောင်ရည်အပြင်ဘက်မှာ။ မည်သည့်ပိတ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆို Motorola စမတ်နာရီသည်ကောင်းမွန်စွာကြည့်နိုင်သော်လည်းနေသာသောနေ့၌အခြေအနေများပြောင်းလဲသွားသည်။ အများဆုံးတောက်ပမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ကာဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းစေသည်။
နောက်ဆုံးပြanotherနာတစ်ခုရှိသေးသည်။ စမတ်ဖုန်းများစွာတွင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးအရာများအနက်တစ်ခုမှာ လက်ဗွေဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကျန်ရစ်။ Moto 360 မှာဒီပြသနာကပိုထင်ရှားလာပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာဒီဂျစ်တယ်အမှတ်အသားများနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးဆိုးရွားပေမယ့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
Moto 360 ဘက္ထရီဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးမှာလဲ။
Moto 360 နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးပြmostနာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘက်ထရီက 300 mAh ဖြစ်လို့ပါ ထုတ်လုပ်သူကကြေညာသည့်အတိုင်း 320 mAh ဟုမပြောသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် Motorola သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည့်အဆင့်သို့ရောက်သွားသည် 320 mAh ဘက်ထရီ သင့်ဘက်ထရီကလျှပ်စစ်အားသွင်းမှုနည်းပါးတယ်ဆိုရင်တောင်မှ။
ပြနာက Moto 360 ဟာရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် X နာရီလောက်ကြာတယ်ဆိုတာငါမပြောနိုင်ဘူး။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီသည်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်သည်။ သင်လက်ပတ်နာရီနှင့်သင်ရရှိသောအသိပေးချက်များကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုသည်ပေါ် မူတည်၍ ဘက်ထရီသည်ကြာရှည်သို့မဟုတ်ကြာရှည်လိမ့်မည်။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ Moto 360 ကိုစမ်းသပ်ပြီး KGW42R update ကို အလယ်အလတ်အသုံးပြုမှုဖြင့် ၂၈ နာရီအထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်ဟုကတိပေးသည်။ သင်သတိပေးချက်များအားလုံးကို activate လုပ်လျှင်၊ voice search နှင့်အခြားရရှိနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပါက၎င်းသည် ၁၆ နာရီခန့်အထိလျှော့ချလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံသည်နေ့များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အချိန်ကိုစစ်ဆေးရန်၊ သတိပေးချက်တစ်ခုရရှိရန်နှင့် Moto 360 ၏အခြားရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုရန်နာရီကိုအလယ်အလတ်အဆင့်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်း။ စမတ်နာရီသည်ပြproblemsနာများစွာမရှိဘဲတစ်နေ့တာကိုကြာရှည်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကထပ်ထပ်ပြီးထပ်ပေးတယ်၊ ဒီနေရာမှာနာရီကငါ့ကိုဆိုးညစ်သောစိတ်ဆင်းရဲစရာလမ်းဖြင့်အပ်နှံပြီးနေ့လည် ၈း၀၀ နာရီမှာငါ့ကိုလောင်စေသည့်နေ့တစ်နေ့ရှိခဲ့သည် သင် ၀ တ်ဆင်သောအခါသင်၌ရှိသည့်မိုက်မဲသောမျက်နှာကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ အချိန်တောင်မပြောနိုင်တဲ့ယူရို ၂၅၀ နာရီ။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏နေ့စဉ် ၀ န်သည်လိုအပ်သည်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ထိုအခါသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Moto 360 တွင် microUSB connector မရှိပါ။ Motorola ကထိုစဉ်က Moto 360 သည်သမားရိုးကျနာရီများနှင့်တူညီသောအသွင်အပြင်ကိုကွဲပြားခြားနားသောအရာမရှိဘဲလိုချင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲကြိုးမဲ့အားသွင်းအခြေခံလိုအပ်ချက်ကနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်ကောင်းစွာသိသည့်အတိုင်း Moto 360 သည်တစ်လုံးပါ ၀ င်သည် microUSB output ကိုနှင့်အတူအခြေစိုက်စခန်းအားသွင်း အရာ, စမတ်နာရီအားမရသည့်အခါတစ် ဦး desktop နာရီအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အမြင်အာရုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင်မည်မျှတင်ထားသည်ကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ အိမ်အပြင်ဘက်မှာအိပ်တဲ့အခါပြနာပေါ်လာတယ်။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်သင်တစ်နေ့တာကိုအိမ်တွင်မဖြုန်းပါနှင့်အားသွင်းရန်အခြေခံကိုမယူပါကနောက်တစ်နေ့ Moto 360 ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုသောကြောင့်သင်အားသွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင့်အားနာရီတစ်လုံးထားမည် သင်မထမ်းဆောင်နိုင်ခင်အထိသင်၏လက်ကောက်ဝတ်ရှိအချိန်ကိုမပြောပါ။ ဟုတ်ပါတယ်လှပသောနာရီတစ်လုံးဖြစ်သော်လည်းအသုံးမဝင်ပါ။
ကျွန်တော်ဒီကြည့်ရတာမကြိုက်ဘူး ငါ Motorola ကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ဘက်ထရီတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကဒုံးကျည်တွေကိုပစ်တာမဟုတ်ဘူး ငါနေ့တိုင်းနာရီအားသွင်းစရာရှိခြင်းသည်ငါ့အတွက်ကံဆိုးပုံရသည်။
အားသွင်းစရာနေရာကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုယူရတာကမကောင်းဘူး၊ ပိုဆိုးတာကအိမ်နဲ့ဝေးရာကိုညအိပ်တည်းခိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာတာရှည်မခံနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်၏စီရင်ချက်မှာရှင်းပါသည်။ သူတို့မှာဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ ထို့အပြင်နာရီသည်ယူရို ၂၅၀ ကျသင့်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကာပိုမိုရှင်သန်နိုင်သည့်နည်းပညာကိုရှာဖွေရန်အဖြေများရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
Motorola Moto 360 သည်စမတ်နာရီတစ်လုံးဖြစ်ပြီးကျန်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်ကျမှုများအတွက်ထူးခြားသည်။ သို့သော်စမတ်နာရီအများစုကဲ့သို့ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်မှာဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်သည်။ Moto 249 အတွက် ၂၄၉ ယူရိုပေးမလား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအရမ်းတူညီတယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ် Moto 360 သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအချက်ကို၏ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနာရီဖြစ်သည်။ G Watch R ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Moto 360 ကိုထင်ရှားစေသည်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်, ဝတ်ဆင်ယခုဖက်ရှင်အတွက်ဖြစ်သော်လည်း, နေ့တိုင်းဒီကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်အလားအလာစေရန်နည်းပညာပိုင်းတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်။
ငါပြောချင်တာကဒီဇိုင်းကိုကြိုက်ရင်မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ Moto 360 ကမင်းကိုစိတ်မပျက်စေဘူးငါမင်းကိုအာမခံပါတယ် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ပြyouနာသည်သင့်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါကနောက်မျိုးဆက်သစ်စမတ်နာရီများကဤပြproblemနာကိုအဖြေရှာနိုင်မနိုင်စောင့်ကြည့်ဖို့ပိုကောင်းသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းကွေးကောက်ဘက်ထရီနှင့်တကွကြွလာ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအပိုင်းသို့သွားရန်မမေ့ပါနှင့် Android Wear အက်ပလီကေးရှင်းများအကောင်းဆုံးနေရာကိုပြပါမယ် သင်အကြိုက်ဆုံးဝတ်ဆင်နိုင်သော app များ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Android Wear နှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးစမတ်နာရီ Moto 360 ၏သုံးသပ်ချက်
သူတို့ဟာကျွန်တော့်ကိုမိုက်မဲတဲ့အရာလို့ထင်နေတုန်းပဲ၊ သူတို့အတွက်ဘယ်နေရာမှာမှအသုံးမ ၀ င်ဘူး
နှလုံးခုန်နှုန်း?4ခဲယဉ်း၌သင် dechatlon နာရီနှင့်အခြားသူများအတွက်ရှိသည်
ငါဂျယ်လီပိုလာမဟုတ်သောကြောင့်သင်တို့သည်ငါ့ကိုဤအထဲမှ (အနည်းဆုံး 20 ယူရိုတန်ဖိုးရှိသည်အထိ) ရောင်းချရန်သွားကြသည်မဟုတ် hehe
ဂီယာ s နောက်ကွယ်မှအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော smartwatch3ကိုနေရာတိုင်းတွင်မေ့သွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ Moto 360 နှင့် r whatch တို့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးဈေးသက်သာသည်။